How to becomeahacker[Article]
Myanmar IT Resource Forum » ARTICLES ZONE » » Article News » How to becomeahacker[Article]
1 How to becomeahacker[Article] on 6th November 2009, 11:21 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-11-06
ဟက်ကာဖြစ်ချင်တယ်… ဟက်ကာဆိုတာဘာလဲ…ဒီမေးခွန်းက အရမ်းကိုတွေ့ရတာများပါတယ်….
ကျွှန်တော်လည်းသေချာမသိပါဘူး… လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ
ကန့်သတ်ချက်တွေကို ဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့သူတွေကိုခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်… ဟက်ကာဆိုတာ
ကွန်ပျူတာလောကမှာပဲရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး… တခြားသော Science ဒါမှမဟုတ် art
တစ်ခုခုမှာ အမြင့်ဆုံးအခြေအနေအထိ ကျွှမ်းကျင်သူတွေကိုလည်း
မဟုတ်ကြပါဘူး.. အထူးသဖြင့်တောု့ ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းလုပ်ဆောင်ပြီး…
ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်အများစုပါ….။တကယ့် ဟက်ကာ အစစ်တွေကတော့ သူတို့ကို
ကရက်ကာ(crackers) လို့ခေါ်ကြပါတယ်… တကယ်တော့သူတို့က
ဘာမှအထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူး…။တကယ့် ဟက်ကာအစစ်တွေကတော့ အဲဒီကရက်ကာတွေဟာ
ပျင်းရိတဲ့သူတွေ၊ တာဝန်မယူတတ်တဲ့သူတွေ၊ ဥာဏ်မကောင်းတဲ့သူတွေလို့ပဲ
။ဒါပေမယ့် ၀မ်းနည်းစရာက စာရေးဆရာတွေ ဂျာနယ်လစ်တွေက
ဖော်ပြနေတော့တာပါပဲ… အဲဒီအတွက်တော့ ဟက်ကာအစစ်တိုင်းက စိတ်ပျက်ကြရပါတယ်…
သူတို့ကြားကအခြေခံခြားနားမှုကတော့ ကွန်ပျူတာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အများစုနားလည်
ထားကြသလိုပါပဲ… hackers build things, crackers break them
ဟက်ကာဖြစ်ချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ… အဓိကအဖြေကတော့ စာဖတ်ပါ… များများဖတ်ပါ..
ပြသနာတွေကိုဖြေရှင်းပြီး.. အသစ်အသစ်တွေဖန်တီးတယ်… တည်ဆောက်တဲ့သူတွေကမှာသာ
ဟက်ကာတွေပါ… အင်တာနတ်ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့သူတွေ.. Operating System
ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့သူတွေ… world wide web
ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာအောင်လုပ်ခဲ့သူတွေက ဟက်ကာတွေပေါ့… ဟက်ကာတွေက
အဲဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိဖို့လိုပါပြီ။ တကယ် ရှိလာဖို့ကတော့
ပါတယ်.. ဟက်ကာတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာတော့ အရမ်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်… ဒါပေမယ့်
ကိုယ့်ပညာကိုအမြဲတမ်း.. လေ့လာနေရပါမယ်..။ သင့်အနေနဲ့ ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီလို
သင်သိတာတွေ မျှဝေပေးသင့်ပါတယ် သင်သိတဲ့ solution
တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့… ပြသနာတစ်ခုအတွက်အဖြေဆိုတာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ
ဟက်ကာ(ပြောရရင်တော့ Creative people တွေပေါ့)သူတို့တွေက လွတ်လပ်မှု (Freedom) ကိုနှစ်သက်ပါတယ်..
သူတို့အပေါ်မှာ authority လာပြတာကို ယေဘူယျအားဖြင့်မနှစ်သက်ကြပါဘူး… ချူပ်ချယ်မှုတွေကိုမုန်းတီးပါတယ်..။
စိတ်ထားမျိုးတွေအမူအကျင့်တွေရှိပြီးရင်တောင်မှ ဟက်ကာမဖြစ်သေးပြန်ပါဘူး…။ဟက်ကာဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့
ပညာရပ်မှာကျွှမ်းကျင်မှု၊ များများလေ့ကျင့်မှု၊ အသေအချာအာရုံစူးစိုက်မှု၊ အလုပ်ကြိုးစားမှုတွေလည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။
Attitude တွေကအရေးကြီးတာမှန်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ Skills
အရင်ဦးဆုံးတော့ Learn How to Program ပါ။ ဒါကဟက်ကင်းမှာတော့
အခြေခံအကျဆုံးပါပဲ။ programming language တစ်ခုမှမသိပဲနဲ့တော့ဘယ်လို
ဟက်ကာဖြစ်ပါ့မလဲနော်… ။ရှိရင်တော့ကျွှန်တော်လည်းမသိဘူး.. ။ဘာ language
language တစ်ခုလို့သေချာမပြောနိုင်ပေမယ့် beginner တွေအတွက် သင့်တော်သလို
powerful လဲဖြစ်ပါတယ်.. ပရောဂျက်ကြီးကြီးမားမားကြီးတွေလည်း
သူ့ကိုသုံးပြီးလုပ်နိုင်တာ လုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ C ပါ
C++ ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ။ သင်တစ်ခုခုကိုကျွှမ်းကျင်ရင် နောက်တစ်ခုဆိုတာ
တွေကတော့ Perl နဲ့ Lisp တို့ပါပဲ။ မရေးနိုင်ရင်တောင်
တကယ်တော့အားလုံးလေ့လာတာကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ programming ကိုမတူညီတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ချည်းကပ်တာပေါ့ ။
အဲဒါအားလုံးကသင့်အတွက်အကျိုးဖြစ်စေမှာပါပဲ။ Hacker တစ်ယောက်ရဲ့ skill
level ကို language တတ်ယုံနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးနော်။ Language
သိပြီးသား concept တွေကိုဆက်စပ်တွေးခေါ်နိုင်ပြီး language
တစ်ခုကိုအသစ်ထပ်လေ့လာရင် ရက်အနည်းငယ်လောက်နဲ့ ရနိုင်ပြီဆိုရင်တော့
တော်တော်ဟုတ်လာပါပြီ။ ဆိုလိုချင်တာက ရှိရှိသမျှသော language
programming language လေ့လာတယ်ဆိုတာ natural language ကိုလေ့လာသလိုပါပဲ။
ပြီးရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲနဲရေး၊ နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ များများဖတ်၊
များများထပ်ရေး၊ ပိုပြီးဖတ်၊ ပိုပြီးရေး……၊ဘယ်အချိန်ထိလုပ်သွားရမလဲဆိုတော့
သင်ရေးတာတွေက ဈေးကွက်ဝင်တဲ့အဆင့်အထိပေါ့။ အရင်တုန်းကတော့ coding
source နဲပါတ်သတ်တဲ့ software တွေ ၊ Programming tools တွေ၊ operating
system တွေ(အဲဒါတွေအားလုံး ဟက်ကာတွေလုပ်ထားတာ) အများကြီးရှိနေပါပြီ။
ဟက်ကာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုချက်ချင်း Linux ဒါမှမဟုတ် BSD-Unixes
မဟုတ်ရင်လည်း OpenSolaris သင့်ကွန်ပျူတာမှာ Install လုပ်လိုက်ပါတော့။
သြော်သင်က Windows ကဘာဖြစ်လို့လည်းလို့မေးတယ်လား… သူက binary တွေနဲ့
distribute လုပ်ထားတာလေ.. code တွေမှဖတ်လို့မရတာ ပြင်လို့လည်းမရဘူးလေ
သင်မဖြစ်မနေ Unix တစ်ခုကိုတော့လေ့လာ ရမယ်ဆိုရင် အလွယ်ကူဆုံးအနေနဲ့ Linux
ကိုကောက်ကိုင်လိုက်တော့လေ။ မပူပါနဲ့ သင်အခုသုံးနေတဲ့ Windows
ကြီးနဲ့လည်းတွဲတင်ထားလို့ရပါတယ်။ကဲအခုချက်ချင်း Learn it , Run it
နော်။ကလိတော့နော်။ အင်တာနတ် ကိုလည်း အပီ မွှေနှောက်တော့နော်… code
တွေကိုဖတ် ပြီးရင်ပြန်ပြင်ရမယ် နော်.. ။ သင်ပျော်မွေ့လာမှာပါ… အသိပညာ
ဗဟုသုတအသစ်တွေကို အရသာခံပြီးတော့ လေ့လာသင်ယူလိုက်စမ်းပါ..။
တခါတည်းပြောပြလိုက်မယ်နော်.. Beginner တွေအတွက်အသင့်တော်ဆုံးကတော့ Ubuntu
ဖြစ်လာနေပြီ… ကြုံတွေ့ရမယ့် ပြသနာတွေအတွက်လဲမပူပါနဲ့
သင့်ကိုကူညီမယ့်သူတွေအများကြီးရှိနေတယ်လေ။ အားလုံးအဆင်ပြေရစေမယ်။ ဟုတ်ပပြီ
ဟက်ကာဖြစ်ချင်သူတွေအတွက် နောက်ထပ်လေ့လာစရာတစ်ခုကတော့ World Wide Web
ကြီးပေါ့။ Browser တစ်ခုခုကို သုံးတတ်ရမယ်နော်(အဲဒါကလူတိုင်းလုပ်တတ်တယ်)၊
HTML ရေးတတ်ဖို့တော့အရင်လေ့လာရမယ်။ ဘာ language မှမတတ်တဲ့သူအတွက် HTML
ကိုစလေ့လာလိုက်ရင် သင်ယူတဲ့နေရာမှာ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေရစေမယ်။
အကူအညီအများကြီးဖြစ်စေမှာပါ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် home page တစ်ခုကို HTML
နဲ့ရေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ ပြီးရင် XHTML ဆိုတဲ့ဆီလေးကိုကူးကြည့်။
ဒါနဲ့ဟက်ကာဖြစ်မယ်ထင်လို့လား။ Website တစ်ခုရေးနိုင်ပြီဆိုရင်တောင်မှ
Hacker ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ သင်နဲ့ အဝေးကြီးပါ.. ။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Web
ပေါ်မှာ website တွေများများလွန်းလို့.. ဒါပေမယ့် အများစုက
ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းလည်းမရှိ တည်ဆောက်ထားပုံကလည်း ညံ့မှညံ့။ သင့်ရဲ့
page မှာတော့ content တွေကိုကောင်းကောင်းထည့်ရမယ်..
ပြသနာတစ်ခုထပ်တွေ့ပြန်ပြီ သင့်ရဲ့ English
စာတတ်မြောက်မှုအဆင့်အတန်းကစကားပြောတော့မယ်။ Internet နဲ့ Hacking
နယ်ပယ်ထဲမှာ English စာကပဲလွမ်းမိုးထားဆဲပါပဲ။ Hacker Community ထဲမှာ
၀င်ဆံ့ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ English စာတစ်ခုကိုတော့
သင်ပိုင်ဆိုင်ဖို့လိုတာအမှန်ပါပဲ။ အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ အသုံးပြုရတဲ့
နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတွေက English ကိုသုံးမှသာအဆင်ပြေတာများပါတယ်။
နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေရှိပေမယ့် အဲဒါတွေဟာအမှန်တကယ်တော့
စိတ်ကျေနပ်စရာမကောင်းပါဘူး။ သူများရေးထားတဲ့ code ထဲမှာပါလာမယ့် comment
တွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ဖို့ဆိုတာလည်း သင် English
စာတတ်မှဖြစ်မှာပေါ့။ Native English Speaker တစ်ယောက် တောင်မှ တခါတရံမှာ
Hacker တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ Language Skills
ရှိမယ်လို့ ဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်ဘူး.. သင်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလဲ..။
ကြိုးစားနိုင်မှာ တော်ရုံလောက်ရမယ်ထင်တယ်နော်။ သင့်ရဲ့ အရေးအသားက ညံ့မယ်။
Grammer လဲမကျဘူး.. ၊ သတ်ပုံအမှားကလည်းများမှများဆိုရင် ဘယ်ဟက်ကာ ကမှ
သင့်ရေးတာကိုဖတ်ချင်စိတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေ.. ။ကဲ အခုပဲ စကြိုးစားပေတော့။
Hacker Culture ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ
ပြသနာတွေကိုသင်ကဖြေရှင်းမယ်။ ရလာတဲ့ သင့်ရဲ့ Solution တွေက
တကယ်ကောင်းရဲ့လားဆိုတာ သင့်ရဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေ ဆရာတွေက
အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။မှတ်သားထားရမယ့်တစ်ခုက သင့်ကိုယ်သင် Hacker
တခြားဟတ်ကာအစစ်တွေက သင့်ကို ဟတ်ကာ ပါလို့ အသိအမှတ်ပြုမှသာ
သင်တကယ်ဖြစ်တာပါ။ သင့်ရဲ့ တတ်မြောက်မှုကိုအခြားသူတွေသိဖို့ Reputation
ကောင်းလာဖို့ဆိုတာ သင့်အနေနဲ့တခြားသူတွေကို ကူညီဖို့လိုပါတယ်။ Open Source
Software တွေရေးကိုရေးရပါမယ်။အဲဒါကအခြေခံအကျဆုံးပါပဲ။ သင်ရေးပြီးရင်လည်း
တခြား ဟတ်ကာတွေ လေ့လာသူတွေအတွက် ပြန်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Soruce
တွေကိုချပြရပါမယ်။ အဲဒီ Software မျိုးကိုလူတွေက Free Software
လို့ခေါ်တတ်ကြပါတယ်.. တကယ်တော့ Open Source Software
လို့ပဲသုံးတာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမိုင်းထဲမှာတော့ 1996
ခုနှစ်ပိုင်းလောက်အထိတော့ ဟက်ကာဆိုတာ Closed Program Closed Source
တွေပဲရေးသားခဲ့တာပါ။ 1997 နောက်ပိုင်းကြမှ ဒီ Culture
ကပြောင်းလဲလာတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Hacker Community နဲ့ Open Source
Developers ဆိုတာ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ တူညီတဲ့ Culture ရှိလာနေပါပြီ။ သင်ဟာ
Newbie တစ်ယောက်ဖြစ်ရင်တော့ ကူညီရေးသားခြင်းကနေအစပြုသင့်ပါတယ်။ သင်စိတ်ဝင်
စားတဲ့ အပိုင်းတစ်ခုကိုရွေးပြီး လုပ်သင့်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ progress က Program
တွေကိုကူညီစမ်းပေးမယ်။ ကူညီအမှားရှာပေးမယ်။ကူညီပြီး modify
လုပ်ပေးမယ်…အဲဒီလိုပေါ့။ အဲဒီလိုလေ့လာရင်းနဲ့ အများကြီးသင်သိလာပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတယ်နော် သင့်ကို နောက်ပိုင်းမှာပြန်ကူညီမယ့်သူတွေနဲ့
Karma ကောင်းကောင်းဖြစ်စေမှာပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအသုံးဝင်တဲ့
အချက်အလက်တွေကိုလူတွေကိုပြောပြတဲ့သူဖြစ်ရင်ကောင်းပါတယ်။ ဥပမာ FAQs
အခုကျွှန်တော် Hacker Mindset အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။
ကျွှမ်းကျင်စွာ ရေးသားပြောဆိုနိုင်ပါစေ။ သင်သိရဲ့လား ဟက်ကာတွေက
စာရေးအင်မတန်ကောင်းတဲ့သူတွေပါတဲ့။ Science Fiction တွေကို ဖတ်ပါ။
Martial-art တစ်ခုခုကိုလေ့ကျင့်ပါ။ ဟက်ကာတွေ့လေ့ကျင့်ကြတာတွေရှိတယ် ကရာတေး
တိုက်ကွန်ဒို ကွန်ဖူးတွေလေ။ သေနတ်ပစ်တာလည်းကောင်းပါတယ်။
တရားဥပဒေနဲ့ညှိမယ်နော်…. ။ တေးဂီတကိုခံစားတတ်ပါစေ။ Muscial Instrument
တစ်ခုခုကိုတီးတတ်ရင်ကောင်းပါတယ်။ ဒါတွေက အရမ်းကြီးအရေးမပါပေမယ့်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ ကျွှမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ မကျေနပ်နေပါနဲ့။
ဟက်ကာအများစုကအများအမြင်မှာတော့ Programmer တွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့်
ဟက်ကာအစစ်တွေက တခြားဆက်နွယ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလဲ ကျွှမ်းကျင်သူတွေပါ။ System
Administration, web design ပြီးတော့ PC Hardware troubleshooting
အစရှိတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်း ကျွှမ်းကျင်ကြပါတယ်။ System Administrator
လို့ပြောတဲ့ ဟက်ကာတစ်ယောက်က Script Programming နဲ့ Webdesign
အပိုင်းတွေမှာလဲ Skill ကောင်းကောင်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေက
ယောင်ဝါးဝါးတွေတော့ မဟုတ်ကြဘူးနော်… သူတို့အကျွှမ်းကျင်ဆုံးအရာဆိုပြီးတော့
Q: ကျွှန်တော်ဟက်ကာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ?
A: *သင် Coding တွေကို အရမ်းကိုကျွှမ်းကျွှမ်းကျင်ကျင်ရေးနိုင် ဖတ်နိုင် အသုံးချနိုင်နေပြီလား?
* Hacker Community ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ တန်ဖိုးရှိမှုတွေကို သေချာသဘောပေါက်နားလည်လား?
* Hacker Community ထဲက Senior Member တစ်ယောက်ကသင့်ကို ဟက်ကာလို့ခေါ်လား။
ဒီသုံးခုစလုံး သင်က ဟုတ်တယ်ဆိုရင် တော့ သင်ကဟက်ကာပေါ့.. နှစ်ခုလောက်ပဲမှန်သေးရင်တော့ မဟုတ် သေးပါဘူး .. ကြိုးစားလိုက်ဦးနော်။
Q: ဘယ်လိုဟက်ကင်းလုပ်ရတယ်ဆိုတာ ကျွှန်တော့်ကိုသင်ပေးမှာလား?
A: ကျွှန်တော်ဒါရေးရင်ဒီလိုအပြောခံရမယ်ဆိုတာသိတယ်။ ကျွှန်တော့်မှာ
သင့်ကိုသင်ပေးဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူး.. Energy တွေကိုလည်းအသုံးမချနိုင်ဘူး
ကျွှန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Project တွေနဲ့ကို ကျွှန်တော့ ရဲ့ အချိန် 110 %
လောက် ကုန်နေ ရလို့ပါဗျာ။ထားပါတော့ ကျွှန်တော်ကသင်ပေးမယ်ပဲ..။ ခက်တာက
Hacking ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သင်ယူရမယ့် attitude နဲ့ Skill ဖြစ်နေတာဗျ။
သင်အဲဒီလိုသာ သူများကိုသင်ပေးဖို့လိုက်ပြီးပြောနေရင် ဘယ်ဟက်ကာမှသင့်ကိုလေး
စားမှာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်မဆိုးနဲ့ ချစ်လို့ပြောတာ။ (ကျွှန်တော်လည်းဟက်ကာမဟုတ်ပါ)
Q: ဒါဖြင့်ရင် ကျွှန်တော်ဘယ်လိုစရမှာလဲ?
A: Linux User Group တစ်ခုခုအရင်ရှာပြီးရင်အကူအညီတောင်းအရင်ဆုံး Linux
တစ်ခု install လုပ်လိုက်တာ အကောင်း ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
Q: ကျွှန်တော်စဖို့နောက်များကျနေပြီလားမသိဘူးနော် ?
A: သင်စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင် အခုပဲစတာကောင်းပါတယ်။
လူအများစုကတော့ 15 ကနေ 20 ကြားထဲမှာ စ ကြတာပဲဗျ။ ဒါပေမယ့်
Q: ကျွှန်တော် Hack နိုင်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲဟင်?
A: သင့်မှာ အရည်အချင်း(Talent) ဘယ်လောက်ရှိတဲ့
နှစ်နှစ်လောက်တစ်စိုက်မက်မက် မရပ်မနားလေ့လာရင် တော့ ဖြစ်သွားကြတာပါပဲ။
ဒီလောက်နဲ့တော့မပြီးဘူးနော် တ ကယ့် Master ဖြစ်ချင်ရင်တော့
ဆယ်နှစ်အနည်းဆုံးပဲ။ ဟက်ကာအစစ်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြန်ရင်လည်း နောက်ကျ
Q: Visual Basic နဲ့ကျွှန်တော်စလိုက်ရင်ဘယ့်နှယ့်လဲ?
A: ဒီလိုမေးရင်တော့ သင် Microsoft Windows နဲ့နှစ်ပါးသွားချင်ပြီထင်တယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခုတော့ မဟုတ်
ဘူးနော်။ မလုပ်ပါနဲ့လားဗျာ.. ။ အဲဒါရုပ်ဆိုးလွန်းပါတယ်။ Python တို့ C တို့ ကို ကျွှန်တော် recommend လုပ်ထား
တယ်လေ။ ပိုသင့်တော်လို့ပြောတာပါဗျာ။ အသေးစိတ်တော့မပြောနိုင်တော့ဘူး။
Q: ကျွှန်တော် System တစ်ခုကို Crack လုပ်ချင်လို့ ကူညီပါလားဗျာ..။ ဒါမှမဟုတ်သင်ပေးပါလား ?
A: ဆိုးပါတယ်ဗျာ။ဒီ FAQ တွေကိုဖတ်ပြီးတာတောင်သင်ဒါမျိုးမေးဦးမယ်ဆိုရင်
သင်ဟာ educable မဖြစ်သေးဘူး တော်တော်လေးကို stupid ဖြစ်တာပဲဗျာ။
ဒါမျိုးကို Email နဲ့ မေးရင်လည်း ကျွှန်တော်လျှစ်လျှူရှုထားမှာပဲ။
Q: ကျွှန်တော်တခြားသူရဲ့ Gmail အကောင့်ရဲ့ password ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့… အဲဒါဘယ်လိုယူလို့ရမလဲ ?
A: ပြသနာပဲ..။ အဲဒါ Cracking လို့ခေါ်တယ်ဗျ..။ အဲဒါမျိုးအားမပေးပါ။
Q: ကျွှန်တော် Cracked လုပ်ခံလိုက်ရတယ်ဗျာ.. ။ ကူညီပေးပါ။
A: ဒါမျိုးမေးရင် သင်သုံးတာ Microsoft Windows ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ Windows
System က ပုံမှန်အားဖြင့် Crack လုပ်တာကို ကောင်းကောင်း
မကာကွယ်နိုင်ဘူးဗျ။ အကောင်းဆုံးက Linux ဖြစ်ဖြစ် well Design ဖြစ်တာ
Q: ကျွှန်တော့် Windows မှာပြသနာဖြစ်နေပြီ။ ကူပါဦး?
A: ကောင်းပြီလေ။ CMD ဖွင့်ပြီး.. “format c:” လို့ရိုက်လိုက်ပါ။ မိနစ်အနည်းအငယ်အတွင်းအားလုံး အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။
Q: ဟက်ကာအစစ်တွေနဲ့ ဘယ်နားမှာတွေ့နိုင်မလဲ?
A: သင့်ပြည်တွင်းက Unix or Linux user group တွေရှာပြီး တွေ့လို့ရတယ်လေ။ IRC နဲ့ Gtalk လိုဟာမှာတော့ မတွေ့နိုင်လောက်ဘူးနော်..။
Q: ဟက်ကာဖြစ်ဖို့ Maths ကောင်းစရာလိုလားမသိဘူး?
A: ကောင်းစရာတော့မလိုပါဘူး..။ trigo တို့ calculus တို့မလိုလောက်ပါဘူး..
(ချွှင်းချက်ရှိနိုင်သည်) formal logic နဲ့ Boolean algebra
တွေတော့လိုလိမ့်မယ်။ အဓိကက logical ကျကျတွေးနိုင်ရမယ်။ reasoning
ကောင်းရမယ်။ intelligence ရှိရမယ်။
Q: ကျွှန်တော်စလုပ်ချင်နေပါပြီ..။ စလုပ်ဖို့ တစ်ခုခုပေးပါ။
A: သင့်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ Talent
ကိုမသိပဲကျွှန်တော်ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရပါဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုနဲ့
Q: Mircrosoft ကိုမုန်းသင့်သလား?
A: Mircrosoft ကမုန်းစရာလားဗျာ။မုန်းမယ့်အစား ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာသာလုပ်။
Q: Open Source ကြီးပဲရေးတော့ Programmer တွေရပ်တည်မှုအတွက် အဆင်ပြေပါ့မလား။?
A: မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ Open Source Software Industry ရှိလာတဲ့အတွက်
အလုပ်တွေပိုတိုးလာတာပဲ ရှိမယ်။ လျှော့မသွားဘူးလေဗျာ။ သူ့ဘာသူ open source
ပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးတဲ့သူက ပိုက်ဆံရမှာပဲလေ။ free software
Q: ကျွှန်တော် Free OS တစ်ခုလိုချင်တယ်.. Linux ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။?
၀န်ခံချက်: Eric Steven Raymond ရေးသားသည့် How To Become A Hacker ကို အဓိကကိုးကား ရေးသားပါသည်။
အရေးအသားမကောင်းပါက ကျွှန်တော်ညံ့သောကြောင့်ဖြစ်ပြီး.. ကောင်းပါက
from: mmso.org/forum(written by eternity)
Last edited by ထက်နိုင် on 28th April 2010, 7:38 pm; edited2times in total (Reason for editing : လင့်တွင် code ခံခြင်း)
2 Re: How to becomeahacker[Article] on 6th November 2009, 1:36 pm
ဟက်ကာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ english ကမရှိမဖြစ်ပါပဲ့ အဓိကတော့ စာများများဖတ်ပါ ပြီးရင် စမ်းသပ်မှူတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သင်တစ်နေ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
3 Re: How to becomeahacker[Article] on 13th November 2009, 7:37 pm
တညျနရော : Singapore
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-19
အခုလို အားပေးတဲ့ အတွက် နှစ်ဦးစလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
4 Re: How to becomeahacker[Article] on 5th December 2009, 5:56 pm
programming မတက်ပဲ နှင့် computer ဟတ်ကာ လုပ်လို့ရလားတဲ့ ။
ကျွန်တော်အဖြေကတော့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော့် ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်မဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးလည်းသိမယ်ထင်လို့ဆက်မရှင်းတော့ဘူး။ထားပါတော့။
programming မတက်ပဲနှင့် hacker တစ်ယောက်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ တဲ့။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
computer networking ကို ကျွမ်းကျုင်အောင် လေ့ လာပါ။ network infrastructure လေး တည်ဆောက်တက်ရုံနှင့် မပြီးဘူးနော် ။ network security ပိုင်းမှာ ပါ ကျွမ်းကျင်နေမှ ဖြစ်မှာ။ပြီးရင် hacking logic နှင့် security tools တွေ ပဲသုံးတက်ဖို့ပဲ လိုတော့ တယ်။ ကိုယ် network ရဲ့ security ကို test လုပ်ရင်း ဥုံဖွလို့ မန်းစရာ မလို့တော့ဘူး hacker ဖြစ်ပြီသာ မှတ်လိုက်တော့ ။ ကျွန်တော် ရှင်းတာ က လည်း လိုအပ်ချက်တွေ အမှားတွေ ရှိပါတယ်။
ဖတ်မိသူ များလည်း ၀င်ပြင်ပေး ကြ ဦးနော်
နှလုံးသားလေး က အချစ်တွေအလကားပေးနေတယ် နော်။ မလိုချင်လည်း အတင်းပေးနေမှာ
5 Re: How to becomeahacker[Article] on 5th December 2009, 6:05 pm
ရပါတယ် programming နဲ့ဘာမမဆိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်
သူတို့က ဟက်တာမြန်အောင်လို့ Tools တွေကိုကိုယ်တိုင်ရေးတာဆိုတော့ programming တတ်ရင်တော့ပိုလုပ်ရမြန်တာပေါ့ ပြီးတော့အဆင်သင့်လေ
6 Re: How to becomeahacker[Article] on 5th December 2009, 7:17 pm
Programming မတတ်ဘဲနဲ့ hacking လုပ်ရင်တော့ ရသင့်သလောက် ရမှာပေါ့။ Basic Hacking လောက်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် Hacker စစ်စစ် တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လုံးဝ (လုံးဝ) ကို မဖြစ်နိုင်တာပါ။
ကိုယ့် Network ရဲ့ Security ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုရင် script တွေတော့ လိုပြီထင်ပါရဲ့။ Linux ဆို Linux Shell Script တွေ ဘာတွေပေါ့နော်။ အဲဒီ့ Script ဆိုတာ ဘာတွေလဲ? Programming Concept ပါတဲ့ Coding တွေမှလား။ ဒါဆို အဲဒါတွေ မသိဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ Network ကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်မလဲ။
ကျနော် မှားရင်လည်း မှားသွားနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်က Hacker မဟုတ်သလို Networking နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လည်း ဘာမှ မသိလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် မှားနေတယ်ထင်လို့ တစ်ခြားသူတွေ အယူအဆလွဲသွားမှာစိုးလို့ ၀င်ရောက် ဖြည့်စွက်တာပါ။
ကို နေဇော် တို့ ကို sp1der တို့နဲ့ ကို xtrm တို့အပြင် အခြား ကျွမ်းကျင်သူတွေ ၀င်ရှင်းပေးရင်တော့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
အဆင်ပြေရင် အောက်ကလင့်ခ်ထဲက ပိုစ့်လေးဖတ်ကြည့်ကြပေါ့။
Most of the best Hackers & Crackers are Programmers
7 Re: How to becomeahacker[Article] on 5th December 2009, 7:57 pm
hacker တွေ အကြောင်းရှင်ပြသွားတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ လည်းကောင်းပါတယ်။
Dos ကို ကောင်းကောင်း တက်မယ်ဆိုရင်တော့hacker ဖြစ်ဖို့ တော်တော်လွယ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။
telnet service ကိုလူတိုင်းသိကြမှာပါ။ but တော်တော်များများ ကတော့ မတက်ကြပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းမတက်ပါဘူး စတင်လေ့လာဆဲပါ။ telnet service မှ attack လုပ်
နိူင်ပါတယ်။ hack နိူင်ပါတယ်။ Dos ကိုအရင်ဆုံးလိုက်ဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိူးဆိုတာကလည်း ခက်သားလားဗျာ ။ နည်းနည်းတက်လို့ နည်းနည်းစမ်းကြည့် ပြီး ကလိလို့ ရမှ ထပ်ပြီးပညာရှာချင်ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာသင့် တော်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောတာ မှားရင်ခွင့် လွတ်ပါ။ ကျွန်တော်လည်းလေ့ လာဆဲမို့ ပါ။
8 Re: How to becomeahacker[Article] on 6th December 2009, 10:32 am
ကိုယ့် Network ရဲ့ Security ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုရင် script တွေတော့
လိုပြီထင်ပါရဲ့။ Linux ဆို Linux Shell Script တွေ ဘာတွေပေါ့နော်။ အဲဒီ့
Script ဆိုတာ ဘာတွေလဲ? Programming Concept ပါတဲ့ Coding တွေမှလား။ ဒါဆို
အဲဒါတွေ မသိဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ Network ကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်မလဲ။
ကို $ƴǩǾ ပြောသလိုပဲ Linux ကို အသုံးပြုရင် တော့ Linux Shell Script တွေကို networking မှာဘာသာရပ်တစ်ခု အနေနှင့် သင်ရပါတယ်။ ကျန်တာတော့ ကျွန်တော် လည်းသိပ်နားမလည်လို့ မပြောရဲ့ဘူးဗျာ။ နည်းနည်းလောက် ကျွန်တော်အမှားတွေကို ၀င် ပြင်ပေးကြပါဦး။
နှလုံးသားလေးက အချစ်တွေအလကား ပေးနေတယ် နော်
9 Re: How to becomeahacker[Article] on 6th December 2009, 5:44 pm
zay wrote: ကျန်တာတော့ ကျွန်တော် လည်းသိပ်နားမလည်လို့ မပြောရဲ့ဘူးဗျာ။ နည်းနည်းလောက် ကျွန်တော်အမှားတွေကို ၀င် ပြင်ပေးကြပါဦး။
အခုခေတ်မှာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ နားမလည်လို့ မပြောရဲဘူး ဆိုတဲ့ စကားမရှိသင့်ပါဘူး။
ကိုယ် နားလည်ရင် နားလည် သလို ရဲရဲတင်းတင်းသာ ပြောလိုက် ၊ သိတဲ့သူက အဆင်ပြေသလို ၀င်ပြင်ပေးလိမ့်မယ်။
လူဆိုတာ မှားဖူးမှ အမှန်ကို သိကြမှာပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား။
ကျနော်ဆို သေချာ မသိလည်း ၊ အဲဒီ့ကိစ္စကို မှန်တယ်လို့ စိတ်ထဲက ထင်နေပြီဆို ပြောလိုက်တာဘဲ။ မှားသွားတော့လည်း မသိလို့ မှားတာဘဲ။ ရှက်စရာမှမဟုတ်တာ။
ပြောစရာရှိတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသာ ပြောကြပေါ့။
10 Re: How to becomeahacker[Article] on 27th April 2010, 8:02 pm
အခုခေတ်မှာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ နားမလည်လို့ မပြောရဲဘူး
ကိုယ် နားလည်ရင် နားလည် သလို ရဲရဲတင်းတင်းသာ
ပြောလိုက် ၊ သိတဲ့သူက အဆင်ပြေသလို ၀င်ပြင်ပေးလိမ့်မယ်။
အင်း ဗျ.... ကျွန်တော်လည်း မပြောရဲလို့ နှုတ်ပိတ်ခဲ့တာကြာပြီဗျ......
ခုလို ပြောပြတာ သိရတော့ တကယ်ကျေးဇူးပါပဲ...ဗျာ..
11 Re: How to becomeahacker[Article]